Baro faa'iidooyinka caado u yeelashada socodka | Bezzia
Susana Garcia | 08/06/2021 20:00 | Jimicsiga, Caafimaadka
El caado socodka waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah marka ay timaado jimicsiga maalin kasta waana la heli karaa qof walba. Waxay umuuqataa jimicsi fudud hadana waxay noo keeneysaa faa iidooyin badan oo laga yaabo inaynaan ogaan. Haddii aad rabto inaad qaab yeelato adigoon laylisyo adag ama anshax marin, waxaad ku biiri kartaa isboortiga ugu aasaasiga ah, caado socodka.
Socodku waa wax qof kastaaba maalin walba samayn karo, marka waa isboorti aan cudurdaar lahayn. Waxay leedahay faa'iidooyin badan oo naga dhigaya inaan u dooranno mid ka mid ah cayaaraha ugu fiican qof walba. Intaas waxaa sii dheer, waa la sameyn karaa xitaa haddii aanaan laheyn asal isboorti oo weyn, marka waxay noqon kartaa isboorti wanaagsan oo lagu bilaabo.
1 Faa'iidooyinka socodka
2 Waxay kaa caawineysaa inaad ilaaliso miisaanka
3 Waxay yareysaa buuqa
4 Wuxuu ilaaliyaa kala-goysyada
5 Sida loo sameeyo caado cusub
Socodku waa caado aad u fudud oo qofkastaaba sameyn karo. Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu fiican ayaa ah taas wax gaar ah looma baahna in la sameeyo. Waxaan kaliya dooran doonaa dhar raaxo leh iyo kabo ku habboon. Kabaha kiiskan ayaa ugu muhiimsan, maxaa yeelay waa inuu ahaadaa mid raaxo leh oo xoogaa barkimooyin leh, in kasta oo aysan ahayn inay ahaato mid gaar ah sida kabaha orodka ama isboortiga kale maadaama saameynta ay yar tahay. Intaas waxaa sii dheer, waan sameyn karnaa maalin kasta iyo si fudud, annaga oo aan wax qiimo ah nagu fadhiyin. Waa mid ka mid ah isboortiga aasaasiga ah ee la fulin karo waana taas sababta mararka qaar aannaan u dareemin, laakiin shaki la'aan waa ciyaar la tixgelinayo.
Waxay kaa caawineysaa inaad ilaaliso miisaanka
Waa muhiim in la ilaaliyo miisaanka caafimaadka qaba maxaa yeelay ku jiridda miisaankeenna waxay leedahay faa iidooyin caafimaad oo badan. Miisaan-yarida waa xun tahay, laakiin sidoo kale cayilnaan badan, maadaama ay la timid dhibaatooyin sida wareegga oo xumaada, kolestaroolka ama dhibaatooyinka wadnaha iyo xididdada. Socodku waa isboorti aasaasi ah laakiin haddii aan maalinba maalin ka yeelno, xawaare fiican, waxaan si fudud ku ilaalin karnaa culeyskeenna. Maalmaha aadan rabin inaad sameyso isboorti aad u daran, soco, maxaa yeelay waa hab kale oo firfircoon oo aad u fudud.
Waxay yareysaa buuqa
In nolol maalmeedka waxaan haysannaa culeys fara badan oo urursan oo aan faa iido u laheyn, Maaddaama xaaladdan jidhkeennu ku habboon tahay in lagu hawlgeliyo oo keliya wakhti ku habboon oo wakhtigan xaadirka ah waxaan ku nool nahay xaalad welwel weligeed ah, oo cawaaqib ku leh jirkeenna iyo habka difaaca jirkeenna. Taasi waa sababta yareynta buufiska ay muhiim u tahay. Socodka maalinlaha ah wuxuu naga caawinayaa inaan hoos u dhigno heerarka culeyska fekerka maxaa yeelay jimicsigu wuxuu abuuraa endorfin oo wuu nasiyaa Tani waxay ka dhigeysaa nidaamkayaga difaaca mid sii xoog badan maadaama aanu saameyn cortisol, hormoonka aan qarsoonaanno marxaladaha walaaca.
Wuxuu ilaaliyaa kala-goysyada
Caadaysiga socodku wuxuu caawiyaa ilaalinta kala-goysyadamaadaama ay xoojiso jilbaha iyo miskaha. Jimicsigu wuxuu kaloo xoojiyaa muruqyada iyo lafaha, waana sababta ay faa'iido ugu leeyihiin jirkeenna. Jimicsi dhexdhexaad ah ayaa lagama maarmaan u ah jirkeena inuu sii ahaado mid kacsan oo xoog badan sanadaha oo dhan. Ka fogaanshaha dhibaatooyinka wadajirka, murqaha iyo lafaha waxaa lagu gaari karaa jimicsi dhexdhexaad ah.
Sida loo sameeyo caado cusub
Soco maalin kasta waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo aad ku joogi karto caafimaad wanaagsan. Caadada cusub waa in la sameeyaa ugu yaraan nus saac maalintii si loo arko faa'iidooyinkeeda. Waa inaad ku socotaa xawaare wanaagsan si aad uhesho faa'iidooyinka ugu fiican, maadaama ku socodka xawaare wanaagsan uu kordhinayo garaaca wadnahaaga iyo dadaalka aad sameyso. Waa inaad heshaa kabo wanaagsan oo raadsataa meelo xiiso leh oo aad ku socon karto, kala duwanaanta marinnada. Waxaan ku soo dari karnaa qaar jiiraya si aan saameyn badan ugu yeelano layliga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Caafimaadka » Faa'iidooyinka caado u yeelashada socodka
Faa'iidooyinka tababarka laalista